Guddiga doorashooyinka oo ka hadlay howlaha horyaala – Radio Muqdisho
Abuukaate Cumar Maxamuud Cabdulle oo ah guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban oo maanta shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahiyay holwaha guddiga horyaala oo ah qabashada doorashada sanadkan 2016.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in guddiga oo ka kooban 22 xubnood loo qeybiyay guddiyo kala duwan oo ay kamid yihiin; guddiga warbaahinta iyo wacyelinta, guddiga xalinta khilaafaadka, guddiga amniga iyo guddiyo oo dhammaan ka wada shaqeeya hirgelinta doorashooyinka dalka.
“Gudiiga shaqadiisa ma ahn qofka xildhibaan noqonaya iyo kan aan noqoney ee waa fududeeyaha howlaha doorashooyinka dalka” ayuu yiri guddoomiyaha.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban Abuukaate Cumar Dhagey ayaa sidoo kale sheegay in doorashada sanadkan 2016 aysan jirin sharci dalka u yaala oo lagu shaqeynaayo hase ahaatee ay ku shaqeyn doonaa heshiiyadii madashada wadatashiga qaran ay wada saxiixeen.
Intii shir saxaafadeedka uu socday ayaa guddoomiyaha waxaa la weydiiyay waqtiga doorashada la qaban doono iyo hadii uu jiro dib u dhac waqtigii loogu talagalay doorashada, isagoo sheegay in sida ay doorashada u dhacayso iyo waqtiga la qaban doono maalmaha soo socda la kala ogaan doono.
Guddoomiyaha ayaa intaa ku daray in waxyaabaha guddigan uu ka shaqeyn doono ay kamid tahay sidii guud ahaan maamulada dalka ay ugu qabsoomi la heyd doorasho lagu kalsoon yahay oo hufan.
Abuukaate Cumar Dhegey, ayaa sidoo kale sheegay in guddigan federaalka ee doorashooyinka dadban ay sidoo kale la shqeyn doonaan guddiyada doorashooyinka ee dowlad goboleedyada.
“Guddigan waa mid madax banaan oo ka shqeynaya hirgelinta doorashooyinka dalka, isla markaana wada shaqeyn la leh dhammaan dowlad goboleedyada iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee wanaaga jecel” ayuu hadalkiisa ku daray.
SHAQOOYIN KA BANAAN XAFIISKA XEER ILAALIYAHA GUUD EE QARANKA
Madaxweyne Xasan Sheekh “Waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay inaad guul ka soo hoyin doontaan ciyaraha Olimbikada adduunka ee RIO 2016”